အလွန်သေးငယ်သောဗုံးကြဲ (Tiny Bombers) - 2Game
အလွန်သေးငယ်သောဗုံးကြဲ (Tiny Bombers)
သင့်ရဲ့ခြေအိတ်ချွတ်မှုတ်လိမ့်မည်ဟုအဆုံးမဲ့ bombastic ပျော်စရာ!
သင်သည်သင်၏တုံ့ပြန်မှုနှင့်မဟာဗျူဟာကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ဖို့လိုသလား? အလွန်သေးငယ်သောဗုံးကြဲသင်သည်ဒင်္ဂါးပြား, ဗုံးနှင့်ထောင်ချောက်များအပြည့်အဝတစ်ဦးဝင်္အားဖြင့်သင်တို့၏အကျင့်စာရိတ္တကိုလမျးညှနျရဘယ်မှာလှပတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုးနိုင်ရန်အတွက်, သင်သည်သင်၏ဗုံးဖောက်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်မှုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်! အဆိုပါအဆင့်တွင်သင်သည်နောက်ကွယ်မှပြိုလဲဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်အသကျရှငျနေဖို့လိုလျှင် မှစ. တွန်းဖို့ရှိသည်။ Tiny ဗုံးကြဲတစ်ခုအဆုံးမဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက, သင့်ရဲ့အဓိကအာရုံအဖြစ်ဝေးသင်ဒင်္ဂါးပြားစုဆောင်းနိုင်ပါတယ်စဉ်ရရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်အမြဲသင်သည်များ၏ရှေ့မှောက်၌အချို့သောသစ်ကိုထောင်ချောက်များနှင့်လတ်ဆတ်သောစိန်ခေါ်မှုများကိုရှာဖွေမည်!
ဘေးအတွက်သူ့ကိုချပြီးမပါဘဲဂိမ်းကမ္ဘာတွင်အားဖြင့်သင်တို့၏အကျင့်စာရိတ္တကိုလမ်းညွှန်ရန်သင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ။ အရပျကိုဗုံးဗျူဟာမြောက်ခြင်းနှင့်မြို့ရိုးကိုဆင်းဗုံး။ ထိုကဲ့သို့သောတိုးမြှင့်ဗုံးအကွာအဝေး, အမြန်နှုန်း, ဒါမှမဟုတ်လက်နက်အဖြစ်ဆုကြေးငွေနှင့်အတူ, သငျသညျခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေအသစ်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အားလုံးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ 20 နီးပါးသော့ဖွင့်ဇာတ်ကောင်။ , ချီတုံချတုံယခု Tiny ဗုံးကြဲကို download လုပ်ပါနှင့်ဤတက်ကြွ, အရူးကမ်ဘာပျေါတှငျကိုယျ့ကိုယျကိုကိုဗတ္တိဇံမထားပါနဲ့။ သငျသညျစိတျပကျြမရလိမ့်မည်!
ကနေရှေးခယျြဖို့●နီးပါး 20 ဇာတ်ကောင်
● Amazing ရုပ်ရှင်တေးသံများ
● 12 ဘာသာစကားများထောက်ပံ့
Android အတွက် အလွန်သေးငယ်သောဗုံးကြဲ (Tiny Bombers) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ အလွန်သေးငယ်သောဗုံးကြဲ (Tiny Bombers) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, အလွန်သေးငယ်သောဗုံးကြဲ (Tiny Bombers) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် အလွန်သေးငယ်သောဗုံးကြဲ (Tiny Bombers) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ အလွန်သေးငယ်သောဗုံးကြဲ (Tiny Bombers) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် အလွန်သေးငယ်သောဗုံးကြဲ (Tiny Bombers) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!